Ny mpizahatany any North Queensland dia miorina amin'ny alàlan'ny fanampian'ny maodely Aboriginal tsara tarehy
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny mpizahatany any North Queensland dia miorina amin'ny alàlan'ny fanampian'ny maodely Aboriginal tsara tarehy
Fizahan-tany North Queensland maniry ireo mpitsidika azy hahatsiaro ho tototry ny tany. Ramatoa tanora tsara tarehy sy madio Aostraliana no nanao ny fonon'ny Vogue Australia ary izy ankehitriny dia endrik'i fizahantany Queensland Avaratra.
Izy no hery manosika vaovao amin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany farany any Queensland Avaratra.
Ilay maodely Aostralianina Aboriginal Samantha Harris dia voafidy hitarika ny fampielezana #FeelGrounds ho an'ny fizahan-tany North Queensland.
Ny hevitra ho an'ny North Queensland dia ny hampiroborobo ny faritra ho toeram-pizahan-tany tropikaly ho an'ireo Aostralianina mikorontan-tsaina any Sydney sy ireo tanàna hafa mitady hiala amin'ny paradisa tropikaly anatiny mba ho lavitra ny rehetra ary hipetraka amin'ny tany.
Haneho sary mahavariana miaraka amin'i Samantha Harris mankafy toerana fitsangantsanganana toa azy i North Queensland.
Mossman Gorge, any atsimo atsinanan'ny Valan-javaboary Daintree, misy lavaka fandroana rano madio, làlana mandeha ary fitsangatsanganana tantara ataon'ny vazimba teratany.
Nosy Fitzroy, toerana snorkeling ankafizina misy torapasika amoron-dranomasina sy ala mando any akaikin'i Cairns.
Nosy Dunk, nosy tropikaly mety indrindra any akaikin'ny Mission Beach.
The Atherton Tablelands, miaraka amin'ireo tanàn-dehibe tsy misy fahita firy sy mpamily mahafinaritra.
Vlasoff Cay, fasika iray mitokana ao amin'ny Great Barrier Reef, azon'ny sidina mahafinaritra avy any Cairns
Palm Cove, toeram-pialan-tsasatra mahafinaritra sy akaiky.
Daintree Rainforest, tontolo iainana voatanisa ao amin'ny Unesco World Heritage izay nihaona tamin'ny haran-dranomasina.
Harris dia vehivavy Dunghutti avy any avaratr'i New South Wales, na dia mipetraka any Sydney aza izy izao. Nanomboka naka modely i Harris tamin'ny taona 2003 tamin'ny faha-13 taonany. Nahazo fanajana izy noho ny fitenenana manohitra ireo troll online raciste tamin'ny taona 2017 ary niantso ny fitomboan'ny fahasamihafana eo amin'ny sehatry ny lamaody tamin'ny 2013.
Ny fampielezan-kevitra Feel Graced dia mikendry ny hisarika ireo Australianina an-tanàn-dehibe ho any Tropical North Queensland miaraka amin'ny fampanantenan-javatra manintona ny tontolo iainana toy ny ala tropikaly sy Great Barrier Reef, fa koa ny fotoana hifandraisanao amin'ireo kolontsaina vazimba taloha.
Sambany ny fampielezan-kevitry ny fizahan-tany aostralianina no nisy olona Aboriginina hatramin'ny nanasongadinana ilay mpilalao Yamatji Ernie Dingo tamin'ny fampielezan-kevitra See Australia tamin'ny taona 2001. Ny vazimba teratany aostralianina dia manodidina ny 3.3% amin'ny vahoaka nasionaly (Fanisam-bahoaka 2016).